Coentrao Oo Weeraray Real: "Mudadii Aan La Joogay Waxaan Iloobey Sida Banooniga Loo Dheel" %
Coentrao Oo Weeraray Real: “Mudadii Aan La Joogay Waxaan Iloobey Sida Banooniga Loo Dheel”
Daafacii hore ee kooxda kubada cagta Real Madrid, wiilka lagu magaaabo Fabio Coentrao, ayaa wuxuu dib umilic-saday ka sheekeynta waayihiisa Los Blancos, isagoona sheegay in mudadii uu ku sugnaa kooxdaan uu kubada hilaamay sida loo ciyaaro.
Laacibkaan ayaa wuxuu inta badan ahaa mid keydka fadhin jiray, illaa iyo uu go’aan sado inuu ka tago Madrid, wuxuun hada ku sugan yahay kooxda kubada cagta Sporting Lisbon, taasoo ka dhisan dalkiisa Hooyo ee Portugal.
Isagoo wareysi xasaasi ah siinayay Majalada MARCA, ee wadanka Spain ayuu yiri: “Markii aan ku sugnaa Real Madrid oo aan keydka isaga jiray, waxaan gaaray heer aan hilmaamo sida loo dheelo kubada ama Banooniga.
Wuxuu intaas ku daray: “Hada, waxaan ku farax-sanahay Lisbon, waxaana rajeynaya inaan sii wato waqtiyadeyda halkaan, waana joogi doonaa sanada soo aadan.
“Waliiba inta ka dhiman xirfadeyda oo dhan, waxaan jeclaan lahaa inaan halkaan iska sii joogo, maxaa yeelay waxaan halkaan ka helayaa wax walba oo aan farxad ku heli karo,” ayuu hadalkiisa kusoo gaba gabeeyay daafacaan reer Portugal.